Vehivavy mpitarika miresaka fanentanana amin’ny zo nomerika ao Thailandy · Global Voices teny Malagasy
Ahoana no irosoana amin'ny zo nomerikan'i Thailandy? Valin-tenin'ny vehivavy enina
Voadika ny 05 Jona 2021 4:41 GMT
Ny lahatsoratra etoana dia avy amin'i EngageMedia, media iray tsy natao itadiavan-tombombarotra, fikambanana teknolojia sy kolontsaina. Navoaka indray ho ampahan'ny fifanarahana mifampizara votoaty amin'ny Global Voices.
Ny hetsi-panoherana ho amin'ny demaokrasia amin'izao fotoana izao ao Thailandy – sy ireo fikasana hanakombona feo manivaka – dia midika fa mbola miatrika fandrahonana amin'ny zon'olombelona sy nomerika ihany ny olompirenena thailandey. Saingy tsy voafetra ho an'ireo mandray anjara amin'ireny hetsi-panoherana ireny ihany ny fandrahonana. Efa ampiasaina ho fitaovana hanitsakitsahana ny zon'olombelona fototra, izay mitatra mankany amin'ny sehatra anjotra, ny aterineto. Voahitsakitsaky ny fanarahamason'ny manampahefana na lotoin'ireo mpisehatra miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana ny zo hanana fiainana an-takonana. Rahonan'ny sivana na ny lalàna henjana ny fahalalaham-pitenenana, indrindra fa ny zo haneho hevitra manivaka.
Tamin'ny voalohany ny antsafa nivoaka tao amin'ny seha-baovao thailandey The 101 World. Navoaka eto ambany ny dika teny anglisy notsongaina tamin'ireo enina nanaovana antsafa.
Mandritra izany fotoana izany, Wasinee Pabuprapap, mpanangom-baovao avy ao amin'ny workpointTODAY, media anjotra iray ao an-toerana sady mamoaka vaovao isan'andro no manao fanadihadiana lalina, no niteny hoe:
Ho valiny, niteny toy izao i Chonticha Jangrew, mpiaro ny zon'ny vehivavy sy ny zon'olombelona sady mpiara-manorina ny Democratic Restoration Group, vondrom-piarahamonina sivily iray mampiroborobo ny fanavaozana demaokratika:
Niteny tahaka izany koa i Anchana Heemina, mpiaro ny zon'ny vehivavy sy olombelona sady mpanorina ny Duay Jai Group, izay manampy ireo nigadra noho ny heloka mifandraika amin'ny fitroarana, mbamin'ireo fianakaviany any Atsimo Lalina (faritra atsimon'i Thailandy ka ao anatin'izany i Yala, Narathiwat, Pattani, ary ny distrika efatra ao amin'ny faritanin'i Songkla izay ahitana ireo vondrona sasany mijoro hanana ny zo hizaka tena) :
Supinya Klangnarong: mpiara-manorina ny CoFact.org, sehatra iray any Thailandy iaraha-miasa hanamarinana ny zavamisy, mampahatsiahy ny mpamaky ho ranga amin'ireo fitaovana nomerika sy sehatra anjotra ampiasaintsika maimaimpoana fa izany no ifanakalozantsika torohay sy tsiambaratelo. Nampiany: